JBCS အသင်းတော် လိပ်စာ နှင့် တည်နေရာ
Home Contact JBCS
Tuesday, 25 August 2009 10:14	administrator
Mailing Address : No.45, Thomson Road, Singapore 307584.
Worship Address : No.45, 3rd Floor, Thomson Road, Singapore 307584.
Contact Phone No. : Rev. Augustus (+65-9842 1323), Rev. Myo Thu (+65-9006 8912)
Bible Study : 01:00 PM
Main Service : 01:30 PM
Men Fellowship : 04:30 PM
Women Fellowship : 04:30 PM
Youth Fellowship : 04:30 PM
Wednesday- Prayer Meeting and Praise & Worship Practice : 7:30 PM
Friday- Choir Practice and Praise & Worship Practice : 7:30 pm
Judson Baptist Church Location Map
Updated for IE ( Internet Explorer ) Browser.
written by Admin, February 27, 2013
Dear ODB readers and NSKA readers,
Please use updated Firefox, Chrome and Wyzo browsers to view Our Daily Bread and NyaSinKonAr.
Thank you so much for visiting here and inform us.
written by Kay Zin, February 27, 2013
ကျမ ဒီဆိုဒ်ကို ဖတ်ရှုလာတာ၃နှစ်ကျော်လာပြါ� ��ီ။ အလွန်ပဲခွန်အားရသလိ� ��ု ၀ိညာဉ်ရေးရာကိုလဲ တိုးတက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်ခွန်အား၊သခင်� ��စကားနဲ့ ညစဉ်ခွန်အားဟာ ကျမအတွက် အားဆေးပါ။ ညစဉ်ခွန်အားကို အထူးပဲခွန်အားရလို� �� ကျမအမြဲတမ်းကျမဖေ့ဖ� ��တ်ကနေ ပြန်လည်ရှယ်ပါတယ်။ဒ� ��ပေမယ့် အခုတလော ညစဉ်ခွန်အားကို လုံးဝဖတ်ရှုလို့မရ� ��ါ။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ညစဉ်ခွန်အားကိုဘယ်� ��နရာကနေဖတ်လို့ရမလ� �ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင် အထူးကောင်းချီးပေးပ� ��စေ။
written by kimsharon-rose, February 21, 2013
I glad to read Daily bread and nightly bread. But I can't read or open nightly bread now. I very like nightly bread so let me share my face book. Thanks n May God bless guys who created this website.
I can't open or read nightly bread written by Sia Soe. God bless JBCS ADMIN.
written by yehzar, August 24, 2012
thank's that's spiritual for my life. i need everytime. i want to other mission contacts.
written by samuel @ win thu naing , March 24, 2012
Thanks you very much.God bless you JBCS member
written by Michael Scoffield, November 28, 2011
I really want to read Our Daily Bread in Burmese Version.
It's very uncomfortable for us due to lack of Download link to Our Daily Bread PDF format
We would like to download Our Daily Bread Burmese Version in PDF format.
We want JBCS to give download link of Our Daily Bread ( Burmese & English) version in PDF format.
It will be very happy for believers to download from everywhere, at any time.
If you can't give download link, can you please send directly to my Gmail?
Please fulfill our sincere request.
written by Hollandia Bloom, November 15, 2011
Thank you for the sermons posted week after week which I appreciated and enjoyed sharing with others.
Allow me to suggest on the names of speakers(Rev, Pastor, Dr. etc.) which you added are incorrect sometimes.
(For instance Dr. Winnie's name isaKachin name but becameaBurmese name) . It would be nice if you could find out the correct spelling before posting as your website is viewed worldwide.
written by johnny, July 25, 2011
...can anyone show me the way of how to get daily bread book(myanmar)???.....I live in Australia..
...this website help me to make relation stronger with GOD..........I want to get daily bread in myanmar language...Is it possible to order somewhere???,,,,,
written by ဒီဇာ, May 14, 2011
ယုံကြည်သူ ..ဘလော့ဂါ အကိုအမများ ခင်ဗျာ..မကြာမှီ ကျတော့်ရဲ့ ..Gospel ablum တစ်ခွေ ထွက်စရာ ရှိပါဖြင့်..ကြောငြာ ထည့်လိုပါသည်..
written by Naw Ku Khu Htoo, March 27, 2011
I really thanks to GOD to get this webside but i can't open Daily Bread Page.....Can you help me?
written by saw titu, March 23, 2011
thank you very much.god bless you website all of jbcs member.
written by Stella, March 02, 2011
where can i watch saya zaw thu lin's sermon???
written by ngun hnu, September 10, 2010
I haven't been to JBCS. JBCS's sermons encourages me.
written by naing soe su, July 25, 2010
I really appereciat all of your serving under the love of God. I participated JBCS worship on the Judson Day very first time.
I Love all of your program even though In maynamr , i never have been seen. Congratulations. May i beapart of yours.
written by Myo Thant Chein, June 28, 2010
thanks to you all in the name of Jesus Christ,we need to get more site ,christian fellowship on line is need now .
written by kzin, May 15, 2010
Thank you JBCS.
written by Mark convey, May 03, 2010
written by winzaya, April 04, 2010
i would great to have this happy to seam thank..............
written by Roger Kyaw Swar Phone Maung, March 28, 2010
written by Melodie Merle, March 11, 2010
written by Mu Shee, March 10, 2010
Thank you for this wonderful website. I thank and praise the Lord for the praise and worship songs and God's words.
written by Nghat Feel Sin, February 14, 2010
ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဦးစွာပြောပါရစေ ... ဒီနေရာကို ပို့ ဆောင်တဲ့အတွက်ပါ ... ။ အင်္ဂလိပ်လို အားနည်းတဲ့အတွက် မြန်မာလို့ စာရေးရခြင်းကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေး� ��ို့မေတ်တာရပ်ခံပါသည် ..။
ပြောပြချင်တာလေးရှိ� ��ယ် ... ပြောသင့်မပြောသင့် တင်ပြသင့် လား ဆိုတာ စဉ်းစားးရင်း အချိန်တွေကြာခဲ့တာပ� �� ..။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်း� ��ယ်က CE ၀တ်ပြုချိန်ကို သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတ� ��် ..။
စင်ကာပူစရောက်ကာစ တနှစ်နီးပါး JBCS နဲ့Little myanmar သို့ သာသွားပီး ၀တ်ပြုခွန်အားယူခဲ့� ��ါသည် ..။ သိပ်မှောင်လွန်းတဲ့� ��ချိန်တွေမှာ ခွန်အားယူစရာအဖြစ် ဒီအသင်းတော်နှစ်ပါး� ��ို တသက်လုံးကျေးဇူးတင်� ��ဲ့ပါသည် ..။ ဘုရားသခင် သာရ်ျ ဘုန်းထင်ရှား အသုံးပြုသော အသင်းတော်များဖြစ်ေ� ��ဖို့ဆုတောင်းပေးနေမိပါသ� ��် ..။ နောက်ပိုင်း KBCS တွင် ရောက်ပီး အချိန်ပြည့်ပါဝင်ဖြ� ��်သည် ... အင်မတန်များပြားသော Church 's volunteer များကြောင့် အခြားအသင်းတော်များ� ��ို့မရောက်ဖြစ်တော့ပါ .. လက်ရှိအသင်းတော်ကနေ� ��ည်း တစ်နာရီလေးတောင် မခွဲနိုင်လောက် တွယ်ငြိနေတာလည်းပါသ� ��်...။
တရက်တော့ အင်ဂလီကန် ပိုးကရင် သူငယ်ချင်း (ရောက်တာမကြာသေးပါ) က ဘုရားကျောင်းတက်ချင� ��တယ် ပြောလို့KBCS ကိုခေါ်ပါသည် ..။ သူလာပါသည် ..။ ဒါပေမဲ့သူ လုံးဝ နားမလည်ပါ (ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် ) ...။ သူက ပိုးကရင်လို ရပေမဲ့KBCS ရဲ့ စကောဘာသာစကားကို တလုံးမှ နားမလည်ပါ ...။ ဒါကြောင့် သူရဲ့ ဆာလောင်မှုကို စာနာပီး JBCS ရဲ့CE သို့ လိုက်လံပို့ ပေးမိပါသည် ..။ ထိုနေ့ က လူငယ်ချိန်တွင် ဆရာမျိုးသူ တရားဟောပါသည် ...။ ထိုနေ့ ကစပြီး တလမှာ နှစ်ကြိမ် အင်္ဂလိပ်လို တရားဟောမည်ဟု ဆိုပီး အင်္ဂလိပ်လိုဟောပါသည် .. ။ ရိုးရှင်းသော အင်္ဂလိပ်စကားများကို� ��ာ ရွေးသုံးပုံရသော ဆရာရဲ့ စေတနာနဲ့ ရည်၇ွယ်ချက်ကိုလေး� ��ားပါသည် ..။ သို့ သော် အင်္ဂလိပ်အားနည်းသော ကျွန်တော်ရော သူရော အဲလို ကြေငြာပီးသကာလ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်� ��ယာက်ကြည့်မိသည် .... ။
ပြီးတော့သူငယ်ချင်း� �� ကျွန်တော့်ကို တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောပါသည် ...။ ဘု၇ားသခင်က ငါတို့ ကို GAYLAND ပို့ တော့မယ်ထင်တဲ့....။
ကျွန်တော်တို့ တွေ တခါတခါ လူမှုရေးတွေ ... အမှုတော်တွေ ဘယ်လောက် လုပ်လုပ် စိတ်နှလုံးက ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပ� ��တယ် ..။
နားရှိပေမဲ့ ဘာလို့ မကြားနိုင်ရတာလဲ ... ကရင်စကားမတတ်တာ .. အင်္ဂလိပ် စကားမကျွမ်းကျင်တာ ... ကျိန်စာသင့်တာလား ...။
ဘုရားသခင်က ငါးဖမ်းဖို့ရေနက်ရာသို့ ရွေ့ ခိုင်းပါတယ် ..။ အခု မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ရေနက်ရာသို့ ရွှေ့ ဖို့ နေသာသာ ... ငါးတွေကိုယ်တိုင်က ပိုက်ကိုလာတိုးပါတယ� �� ...။ ဘာလို့ များ တငါသည်တွေက လွယ်လင့်တကူ မဖမ်းဆီးတာပါလိမ့် ...။
ဘာသာစကားတွေအများကြ� ��း ကွဲပြားစေလိုက်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြံအစည်ကို လိုက်လံစဥင်္းစားဖို့ဥာဏ်မမှီတာ ၀န်ခံပါသည် ..။
သူငယ်ချင်း ရယ် ဒို့ တွေ အတွက် နေရာတစ်ခုရှိသေးတယ် စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ဆိုပီး ... little myanmar သို့သူ့ ကိုလိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါသည် ..။
နှုတ်ကပတ်တော်က ဘ၀င်မမြင့်ဖို့ ... နှိမ့်ချင်ခြင်းရှိ� ��ို့ သွန်သင်ပါသည် .......။ ဘုန်းတော်ကြီး winsome ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် ..။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာပူ ထိုနေ့ က တကျောင်းတက်တကျောင်� ��ဆင်း နဲ့ တနေကုန်ပင်ပန်းပေမ� ��့နှစ်သစ်ကာလမှာ တနေ့ တည်း အသင်းတော်ကြီးသုံးပ� ��းထံမှ ဘုရားသခင်ရဲ့ လူတို့ ရဲ့ မျက်စိဖြင့် မမြင်ရသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာမျာ� ��ကို ရရှိခဲ့လို့ကျေနပ်သည် ..။
မရင့်ကျက်ခင်တုန်းက ပြောမိတယ် ...။ ကိုယ်က ဦးဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ လုပ်သမျှကို ဝေဖန်မဲ့တဲ့စကားတွေ� ��ို ဂရုမစိုက်ဘူး ...။ အဲဒါတွေသာနားထောင်ပ� ��းခံစားနေရင် ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူး ဆိုပီးတော့ပေါ့လေ ....။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်မှာတော့ အဲလို တွေးလို့မရဘူးဟု ယူဆမိသည် (နောက်ပိုင်း) .. ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင� ��က အဟိတိရစ်ဆာန်လေးတစ်� ��ကာင်ဖြစ်တဲ့ စာငှက်ကိုတောင် အငတ်မထားဘဲ ဂရုစိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ လူသားခြင်းပိုရ်ျ စာနာဖို့ လိုအပ်ပါသည် ...။
Negative side မှ မရင့်ကျက်စွာဝေဖန်မ� �� ရေးမိတယ်ဆိုရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်� ��ါသည် ..။
အမှန်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပ� ��သည် ... အင်္ဂလိပ်စကားတိုးတက်� ��ို့ဘုရားသခင်ရဲ့ ရူပါရုံလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိ� ��ုင်လို့ပြောမိသောစကားများအ� ��ွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသ� ��် ...။သို့ ပေသော်ငြား တခါတရံကျွန်တော်တို့ဆာလောင် နေပါတယ် လို့ သာ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါစေတော့ ...။
မည်သို့ သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှောက်လှန်လို စိတ်မရှိရိုးအမှန်ပ� �� ...။
ငှက်ဖီးဆင်း @ သိန်းလွင်ဦး
written by Kyaw Zin, January 07, 2010
it would be great to have contact ph no. to inquire some special services such as new year eve, easter eve, etc.
written by Siphoe, September 25, 2009
Glad to read daily bread in myanmar. Thanks God for this kind of site and thank u who created this. GBU
Last Updated ( Sunday, 20 October 2013 00:19 )
Judson Baptist Church Singapore Vimeo Channel
Judson Baptist Church Singapore YouTube Channel
Judson Baptist Church Singapore | Create Your Badge
( မြန်မာ ကျမ်းစာ ) Myanmar Language Bible Program for Smart Phones
For Android Phone/Pad ( Updated New App )
(Search "Myanmar Bible" in Google Play Store (Or) Click Here and open with Play Store)
For Apple iOS iPhone/iPad ( Updated New App )
(Search "Myanmar Bible" in iTunes Store (Or) Click Here and open with iTunes)
( မြန်မာ ဓမ္မသီချင်း ) Myanmar Language Hymns Program for Smart Phones
For Apple iOS iPhone/iPad
(Search "Chee Mwam" in iTunes Store (Or) Click Here and open with iTunes)
For Android Phone/Pad
(Search "Chee Mwam" in Google Play Store (Or) Click Here and open with Play Store)
Content View Hits : 934147